Usebenzisa i-jQuery ukwenza iJuice Up ekhasini elijwayelekile leWebhu | Martech Zone
Usebenzisa i-jQuery ukwenza iJuice Up ekhasini elijwayelekile leWebhu
NgoLwesithathu, ngoMashi 18, 2009 NgeSonto, ngoFebhuwari 17, 2013 Douglas Karr
i-jQuery yenze iqhinga nje.
Sesha i-jQuery + cishe nganoma yini, futhi uzothola ukuthi onjiniyela bakhe izixazululo, ezibizwa ngama-plugins, ezikulungele ukusebenza! Kulokhu, ngenze ukusesha i- "jQuery carousel" futhi ngathola okumnandi, okuphelele Isixazululo se-jQuery carousel kuDynamic Drive.
Enye into enhle nge-jQuery ukuthi kungukuthi ikhodi manje isingathwe yiGoogle. Ngenxa yalokho, awudingi ukulayisha i-jQuery kuseva yakho, futhi abafundi bewebhusayithi yakho akudingeki bayilande njalo. Uma beye kusayithi elilodwa elinereferensi ye-jQuery, ligcinwa ngokuzenzakalela ukuze lisetshenziswe nesayithi lakho!
Mane nje ungeze ikhodi engaphakathi kwethegi yakho yekhanda bese ucisha futhi usebenzisa i-jQuery:
Ukuze ngisebenzise i-carousel, bekufanele ngilayishe futhi ngikhombe iskripthi se-stepcarousel:
Ngemuva kwalokho, ukuguqula ikhasi kwakulula! Ngafaka i-carousel yami ngaphakathi kwe-div ebizwa umagazini nesiqeshana se amapaneli ngaphakathi kwe-div ebizwa ibhande. Ngibe sengengeza i-chunk encane yekhodi yezilungiselelo ngaphakathi kwethegi yomzimba wami.
Ungenza ngendlela oyifisayo isenzo kancane. Kulokhu ngishintshe iskripthi ukuze sisebenze ngokuzenzekelayo lapho ikhasi lilayisha. Ngilungiselele ijubane nobude obukhonjiswa iphaneli ngayinye, kanye nezinkinobho zokuzungezisa ngesandla amaphaneli kwesobunxele nangakwesokudla. Esinye isici esihle sale plugin - uma ufika kuphaneli yokugcina, kuso buyisela emuva ngibuyele kwelokuqala!
Yeqa i-Resume ne-Job Fair
Imibuzo Emihlanu Yokuhlola Ukuhambelana Kwakho Kokuthengisa Nokumaketha
Mar 20, 2009 ku-11: 39 AM
Njengamanje ngakha kabusha iwebhusayithi yami futhi ngihlose ukwethulwa kule mpelasonto uma konke kuhamba kahle. Ngisebenzisa i-jQuery ngezici ezimbalwa zayo futhi anginazikhalazo kuze kube manje. Konke kubonakala kunikeza leyo "web 2.0" umuzwa futhi ngethemba lokuthi kuzoncoma kuphela isiza esiphelile.